“अबोध पशुपंक्षीको रगतले भगवान कसरी खुशी हुन सक्ला र” – बिनय यादव (विचार)
“यदि हामिमा अझ मानवता मरेको छैन भने अब हामिले निर्मम पशुबलिलाई रोक्नुपर्छ । मठ मन्दिरलाई बधशाला बन्नुबाट रोक्नुपर्छ ।”
३० असोज, २०७५ | प्रदेश नं. २, सिरहा || प्रकाशित १२:०४:००
नेपालीहरूको महान चाड नजिकिँदै गर्दा पशुबलि विरुद्धको आवाजहरु उठ्ने गरेको पाईन्छ । तर, पशुबलि विरुद्धको आवाज यदाकदा मौसमी रूपमा मात्र उठ्ने गरेको पाईन्छ । देश भित्र र देश बाहिर (भारत) बाट पनि अहिंसा प्रेमीहरूले बलि प्रथा रोक्न आवाज उठाए पनि सरोकारवाला पक्षले आवाजलाई नजरअन्दाज नगर्दै अबोध पशुपंक्षीहरूको रगतरूपी होली प्रथालाई निरन्तरता दिईरहयो ।
नेपाली समाजमा बलि प्रथा सनातन कालदेखि चल्दै आएको विश्वास गरिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ (भाकल) देखि लिएर कुल, परिवार र समाजको हित हुने नाममा देवीदेवताको मन्दिरमा बलि दिने कार्य चल्दैै आएको छ । देवीदेवताको नाममा दिनहुँजसो हजारौंको संख्यामा पशुपंक्षीको बलि दिइन्छ ।
देवीदेवतालाई बलि दिँदा देवदेवीहरू खुशी हुन्छन् र आफूले चिताइएका ईच्छा, आकांक्षाहरू सबै पुरा हुन्छन् भन्ने मनोविश्वासले मानिसहरु बलि दिने गरेको पाईन्छ । पशुबलि दिए देवीदेवताको आर्शीवाद मार्फत चिताएको मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वासले पशुबलि प्रथा समाजमा विद्यमान रहेको पाईन्छ ।
दसैंमा सबै जसो समुदायमा पशुबलि दिनु पराम्परागत अनिवार्यता जस्तो देखिन्छ । बलि प्रथावादीहरू परम्पराको नाममा निर्दोष पशुको घाँटी रेटेर रगत चढाउने बर्बर कार्य गर्दै आएका छन् । तर, अहिंसावादीहरूले भने शक्तिरूपी देवी दुर्गाको उपासना गर्दा फलफूल चढाएको पाईन्छ ।
पशुबलि चढाउने कुरीति तथा कुप्रथाले हाम्रो संस्कृतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरको छ । एकातिर हामी सबै प्राणी भगवानको सन्तति हौँ पनि भन्ने अनि अर्कातिर अबोध र निर्दोष प्राणीको हत्या गरी भगवानलाई खुशी पार्ने नाममा अबोध पशुको बलि चढाउने ? के देवीदेवताहरू रगतका प्यासी हुन् ? के उनीहरू बलि चाहन्छन् ? रगत माग्छन् ? त्यो पनि आफुले सृजना गरेको सन्तानको घाँटी रेटेर चढाएको रगत ? आफ्नै सन्तानको बध गरी रगत चढाउँदा भगवान कसरी खुशी हुन सक्छन् ? आफ्ना छोराछोरीको बलि चढाउँदा कुन चाँहि आमा खुशी हुनसक्छिन् र ? पशुपंक्षीको पनि परिवार हुन्छन् । भगवानलाई खुशी पार्ने नाममा कसैको हत्या गरेर परिवार नै उजाड बनाइदिनु कसरी मानवता हुन सक्ला र ? अतः निर्दोष पशुपंक्षीकोे बलि चढाउनु देवीदेवातालाई खुशी होइन दुखी बनाउनु हो । उनीहरूको मुहारमा हर्ष होईन, आँसुको वर्षा गराउनु हो, चित्त दुखाउनु हो ।
अहिलेको एकाईसऔं शताब्दीमा पनि बलि प्रथा जस्तो बर्बर र अमानवीय कुसंस्कृति हाम्रो समाजमा विद्यमान रहनुको मुख्य कारण अन्धविश्वास नै हो । अवोध पशुको घाँटी रेटेर रगत चढाउँदा देवीदेवता खुशी हुन्छन्, आफूले इच्छाएको पूरा हुन्छ भन्ने भ्रम जुन जनमानसले आफ्नो मन मस्तिष्कमा पालेका छन्, त्यही नै बलि प्रथा जस्ता कुप्रथाको मूल जड हो । अन्धविश्वासको कालो बादल हाम्रो समाजमा यसरी मडारिएको छ कि हामी स्वतन्त्र भएर सोच्न पनि सक्दैनौं । जस कारण हामी गलत र सहि बिचको फरक पनि छुट्टाउन सक्दैनौं र बलि प्रथा, बोक्सी प्रथा, छुवाछूत प्रथा जस्ता अनेकौं कुप्रथा तथा कुसंस्कृतिलाई अँगालिरहेका छौं ।
अब हामीले आफूले आफूलाई सोध्ने बेला आएको छ । के हामी सभ्य समाज निमार्ण गर्ने बाटो अँगाल्ने हो या असभ्य समाज निर्माण गर्ने बाटो अँगाल्ने हो ? अन्धविश्वास मुक्त समाज उन्मुख बाटो अपनाउने हो या अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिने बाटो अपनाउने ? अहिंसाको बाटो हिँड्न सिकाउने बाटो अँगाल्ने या हिंसाको बाटो हिँड्न सिकाई हामीलाई हिंस्रक बनाउने बाटो अपनाउने ? अब हामीले सोच्ने र यात्रारूपी जीवनमा बाटो रोज्ने बेला आएको छ ।
वास्तवमा हामीले बलि प्रथाको अन्तरनिहित सन्देशमूलक भाव बुझ्न सकेनौं । बलि दिनु भनेको त्याग गर्नु हो र हामी भित्र रहेका काम, क्रोध, लाभ, मोह घृणा जस्ता अमानवीय गुण तथा कुप्रवृत्तिहरू त्याग गर्नु हो । र, यो नै सहि अर्थमा पञ्चबलि दिनु हो । तर बिडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रो अबुझता हो या बेबुझता, हामीले आफ्नो कुप्रवृत्तिको बलि दिनु पर्नेमा निर्दोष पशुको बलि दियौं । यस प्रथाले हाम्रो कुप्रवृत्ति बढाउनु बाहेक अरू केहि गरेको छ ? सोचौं ।
अतः अब हामीले निर्मम पशुबलिलाई रोक्नुपर्छ । मठ मन्दिरलाई बधशाला बन्नुबाट रोक्नुपर्छ । प्रेम र शान्तिको सन्देश बोक्ने धर्मलाई पशुबलिसँग जोड्नु हुँदैन । पशुबलि प्रथालाई सधैं सधैंका लागि उन्मूलन गर्नका लागि हामीले आफूभित्र रहेको कुप्रवृत्ति तथा अमानवीय गुणको बलि दिनसक्नु पर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र शान्तिपूर्ण र सभ्य समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।